मुख्य खबर Archives - Page 309 of 311 - Saptakoshionline
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सुरु भएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने कार्य मुस्ताङमा सफल परिक्षण भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङमा हावाबाट निकालिएको बिजुली प्रयोग गर्न थालिएको छ । एउटा पोलमा दुई पंखा जोडि निकालिएको बिद्युतबाट अहिले पाँच बल्वहरु बालिएका छन् । परिक्षणका लागि पाँच बल्व बालेको डिएसपी हरिहर योगीले बताए । स्पेनको बुद्ध पावर कम्पनी...
७ नेता लाई कारबाही गर्न सिफारिस
२ साउन, मोरङ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मोरङका अध्यक्षमण्डलीय नेताहरुले ७ जना उच्च पदका नेताहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरेको छ । राजपा नेपाल मोरङले नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राधे कामतले यस्तो कुरा बताएका छन ।पार्टीको विधान विपरीत, पार्टी हित र संगठनलाई विभाजन गर्ने, पार्टीको छवीलाई नै बिगार्ने काम गरेक...
इटहरीमा फेरी घुम्ती शौचालय संचालनमा ल्याइने
सुनसरी, २ साउन इटहरीमा बढ्दो मानव चापलाई लक्षित गर्दै १० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको घुम्ती शौचालय बन्द भएको केही समय पछि नव निर्वाचित जन प्रतिनीधि हरुको प्रथम बैठक बाट फेरी संचालनमा ल्याइने भएको छ । केही वर्ष अगाडी जिल्ला विकास समिति सुनसरी, इटहरी नगरपालिका, लुमन्ती र सीमएन नामक गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा बनेको घुम्ती शौचालय इटहरी नगरपालिका परिसरमा थन्किएको थियो । “इटहरी खुला दिशामुक...
इटहरीमा फ्रि वाईफाई जोन बन्दै
इटहरी । जन निर्वा्चित पदाधिकारीहरुको आइतबार बसेको बैठकले इटहरी उप महानगरपालीकाको पर्यटक आवगमन हुने स्थानमा लाई फ्रि वाईफाई जोन बनाउने निर्णय गरेको छ । इटहरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्न पर्यटक आवगमन हुने स्थानमा फ्रि वाईफाई जोन बनाउने निर्णय गरेको नगरको प्रवक्ता तोकिएकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिएकि छिन् । वैठकले नगरपालिकाले सम्पादन गरेको कामका नगर भित्र सञ्च...
इटहरीमा हर्न बजाउन नपाइने, साउन १६ मा (नो हर्न जोन) बनाइने
इटहरी/ साउन १६ गतेदेखि इटहरीलाई हर्न निषेधित क्षेत्र (नो हर्न जोन) बनाइने भएको छ । इटहरी उप–महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र भित्र हर्न निषेधित क्षेत्र ध्वनी प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने योजनाअनुरुप घोषणा गरिएको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।अब इटहरी मा अनावश्यक हर्न बजाउन पाइने छैन । घुमाउरो बाटो वा घुम्ती, आकस्मिक अवस्थामा भने हर्न बजाउन पाइने जनाएको छ । पूर्वमा ओम पेट्रोल प...
छुट्ला नि मतदाता नामावलीमा तपाईको नाम !
काठमाडौं / मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण कतै तपाईले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट खसाल्न पाउनु त भएन नि ? नामावलीमा नाम नभएकै कारण धेरैले यस पटकको निर्वाचनमा भोट खसाल्ने मौका घुमाउनु पर्यो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७ माघ भित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । अब हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि तपाईले भोट खसाल्न नपाउनु होला नि । त्यसका लागि अब भने फोटोसहितको मतदाता नामावली भ...
दोस्रो पटक फुटको संघारमा राप्रपा, राप्रपाको फुटको इतिहास यस्तो………………………
१ साउन, काठमाडौँ । पूर्व पञ्चहरुको पार्टी भनेर चिनिने रापप्रपा एकीकरणको पाँच महिनामा दोस्रो पटक फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको कार्यशैलीका कारण राप्रपा फुटको संघरामा पुगेको भनिए पनि यसमा संविधान संशोधन र सत्ता स्वार्थ समेत जोडिएकोे छ । थापाले पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपतिशमसेर राणा समूहलाई जानकारी नै नदिइ ४२ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि पार्टीको विवाद सतहमा ...
साउन लाग्यो, महिलाका हात हरियै
काठमाडौं, १ साउन, साउन लाग्यो । अब नेपाली महिलाका हात हरियै । विशेषगरी हिन्दू धर्माबलम्बी महिलाहरुले साउनमा हरियो चुरा पोते लगाए शिवजी महादेव खुशी हुने विश्वाससहित हरियो चुरापोते लगाउँछन् । जताततै हरियो हुने भएकाले ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ’ भन्ने उखानै बनेको छ । सूर्य मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने साउन १ गतेलाई साउने संक्रान्तिका रुपमा मनाइन्छ । माघ १ गते अर्थात्...
कमल थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान
काठमाडौं । राप्रपाका बरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणाले पार्टी अध्यक्ष कमल थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अभियान थालेका छन् । पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टी जनाएका राणाले थापालाई हटाउन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य मनोनितमा मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै राणाले शुक्रवार विज्ञप्ती जारि गरेका थिए । बिज्ञप्ती जारी गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै राणापक्षले ...